ပြင်ပဝေါလ် rendering | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan - wallpro.com.tw
ChengLin Innovation Co., Ltd.အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ပြင်ပဝေါလ် rendering, အိမ်ဟောင်း ပြင်ပဝေါလ် renderingနှင့်သားရေ Peeling အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် ပြင်ပဝေါလ် rendering အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီအတွက် Taiwan Nippon ပန်းချီကားကအတည်ပြု။
နိပွန်:ကျောက်မြတ်အနုပညာ,အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားသားရေကြောကျခဲဆေးသုတ်သည့်သဘာဝကျောက်ကိုဖန်ဆင်း sintered ဆေးသုတ်တဲ့မျိုး,မြင့်မားသောသုံးပြီး-ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည့်သဘာဝလင်းကျောက်သဲ,800 မှာ sintered°1200 မှ°အပူချိန်မြင့်,ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်အရိုးနဲ့ပေါင်းစပ်.အဆိုပါပစ္စည်းကိုမှန်ကန်ကြောကျခဲဆေးသုတ်တဲ့ကြွယ်ဝသောအရောင်ဖန်တီး,အစစ်အမှန်ကျောက်များနှင့်စကျင်ကျောက်အုတ်များကဲ့သို့ပြီးပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို.
အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားသားရေကြောကျခဲဆေးသုတ်၏ 40 ကျော်မျိုးအပြင်မြို့ရိုးကိုအရောင်,အမှန်တကယ်ကသဘာဝကျောက်ထူးခြားတဲ့ texture နှင့်အတူ,ပေါင်းစုံ-ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းကြောင်းဒီဇိုင်း,သုံးအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်-ရှုထောင်ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းမှု.
ဂျပန်များ၏ဆန်းသစ်စံချိန်စံညွှန်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်'s ကိုဟောင်းများကိုအိမ်သူအိမ်သား,ကျွန်တော်တစ်ဦးမွငျ့မားဖန်တီးရန်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဂျပန်နိပွန်သောကျောက်ဆေးသုတ်ကိုသုံးပါ-လုံခွုံမှု,မြင့်သော-အရည်အသွေး,မဟုတ်တဲ့-အဆိပ်သင့်သောကျောက်ရေညှိနှင့်မှိုတားဆီးရာမှရေညှိများနှင့်မှိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အပြင်မြို့ရိုးကိုဆေးထိုးခြင်း.အဆင်ပြေနှင့်သန့်ရှင်းတည်းခို,ဤလုပ်ငန်းစဉ်ရေခံနိုင်ရည်,တားဆီးရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် flaking,တစ်ခုနှင့်လေထုဖန်တီး,ဓမ္မ,သန့်ရှင်းကြည့်.
လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းအရ,ဤကျောက်ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းစဉ်အားအလွယ်တကူအပြင်မြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်များအမျိုးမျိုးမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်,ထိုကဲ့သို့သော cylindrical အဖြစ်,စောင်းနေသော,ကွေး,နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောကွန်ကရစ်များနှင့်မော်တာအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှသက်ဆိုင်သော. ,PC ကို,GRC,ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့,tile ကို,စသည်တို့ကို.,ယင်းအစဉ်အဆက်မှတုန့်ပြန်-ဗိသုကာဒီဇိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့,ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ဧည့်သည်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ.
အဟောင်းကိုအိမ်၏တိကျခိုင်မာစွာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်,ကုမ္ပဏီတစ်ခုက texture နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောကြောကျကိုဆေးသုတ်သည်မြို့ရိုး,ရေစိုခံခြင်းနှင့်ရာသီဥတုခုခံ,အနာနှင့်အယ်လကာလီခုခံ,မရှိနွမ်း.
2)အရောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝ,ယင်းအလွှာအားကောင်းနေ,ထိုသို့ ubiquinone ကြောင့်အရောင်ပြောင်းလဲပစ်မည်မဟုတ်,နေရောင်ထိတွေ့မှုများနှင့်ဓါတုတိုက်စားမှု.
4)မူရင်းဇိမ်ခံနှင့်မိုးသည်းထန်စွာသဘာဝအသောကျောက်အလှဆင် features တွေ.
5)ယင်းအပေါ်ယံပိုင်းရုပ်ရှင်အစိုဓာတ်ကို permeable ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက,ဒါကြောင့်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ကွာထံမှမတော်တဆမှုတားဆီးနိုင်ပါတယ်.
7)ဇိမ်ခံနှင့်ထိပ်တန်းသောကျောက်ဆေးသုတ်ချော 95 အမျိုးမျိုးကိုပြသနိုင်ပါတယ်%အလားတူသောကျောက်ပုံစံများ.
9)ဒါဟာမြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်၏ပြားချပ်ချပ်ချွတ်ယွင်းချိန်ညှိ၏ function ကိုရှိပါတယ်,မြို့ရိုးအမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသေးစားဒါကိုတော့ဖုံးအုပ်နှင့်မျက်နှာပြင်ကွမျးတမျးညှိ.
1)မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသောအဟောင်းကိုဆေးသုတ်ဇာတ်ကားတွေပြန်လည်ပြုပြင်(ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်အပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများ,မှုန်ရေမွှားအုပ်ကြွပ်,elastic အုပ်ကြွပ်,acrylic အက်ဆစ် lysine နှင့်အခြားအဟောင်းကိုဆေးသုတ်ရုပ်ရှင်).
2)အမျိုးမျိုးသောအသစ်ကအဆောက်အဦးပစ္စည်းများ. (site ကိုကွန်ကရစ်,စိနျပွောငျး,PC ကို,GRC,extruded ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့,စသည်တို့ကို.)
ပြည်ထဲရေးနှင့်အဆောက်အဦး၏အပြင်ပန်းရိုးကို. (detach လုပ်လိုက်သောအိမ်များ,တိုက်ခန်းများ,စျေးဆိုင်,အများပြည်သူအဆောက်အ,ဇိမ်ခံအိမ်များ,စသည်တို့ကို.)
အသုံးပြုတဲ့ tools တွေကိုသေးငယ်တဲ့ဂေါ်ပြားပါဝင်သည်,ဖြီးဖြီး,ဝက်မှင်ဘီး,စသည်တို့ကို.အဆိုပါတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုတည်းအဆင့်ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်,သို့မဟုတ်ရောထွေးနှင့်ပွဲစဉ်,အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွား,စသည်တို့ကို.,နှင့်အရောင်နဲ့သုံးကိုရွေးချယ်ပါ-ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုအညီရှုထောင်ပုံစံ.အဆိုပါဖန်တီးမှု texture ဆေးသုတ်အရေပြား၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးအဘို့သင့်လျော်သည်,အပြင်မြို့ရိုးကိုရေစိုခံဆေးသုတ်စီမံကိန်းကိုကိုအစားထိုးနိုင်သည့်,တစ်မူထူးခြားသောတောက်ပပြီးလှပရေစိုခံအင်္ဂါရပ်ကို.အဆိုပါပြင်ပမြို့ရိုးကိုပန်းချီသုံး add နိုင်ပါတယ်-ပြင်မြို့ရိုးရှုထောင်အပြောင်းအလဲများ,အဆိုပါဆေးသုတ်အဓိကမြို့ရိုးကိုအိမ်တွင်းအသုံးပြုသည်ဆိုပါကတစ်ဦးအမြင်အာရုံဖန်တီး,သုံးယောက်စဉ်-ရှုထောင်ပုံစံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမှအာကာသကထပ်ပြောသည်.
ကနေရှေးခယျြဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကျော် 32 မျိုး,ပညာရှင်ပီသစွာအထူး tools များနှင့်အတူလိုက်ဖက်,ဖောင်းကြွပုံစံများအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်,အစဉ်အလာပြားအပြင်မြို့ရိုးကိုဆေးသုတ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်,တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအမြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို,တူညီတဲ့အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများ,အသစ်အသစ်သောတစ်အမျိုးမျိုးပုံဖော်ဖို့ပြင်ရိုး.
မြို့ရိုးကိုတီထွင်ဖန်တီးမှု,သငျသညျအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး!ကအပြင်ပန်းရိုးပြင်ဆင်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အနုပညာအတွင်းပိုင်းသည်မြို့ရိုးဟုတ်မဟုတ်,ChengLin ဆန်းသစ်အပေါ်ယံပိုင်းကျွမ်းကျင်သူများကမ္ဘာကြီးကိုမွေးစားခဲ့ကြ's ကိုအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်,အားလုံးကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ ribon နိပွန်အင်ဂျင်နီယာကုတ်အင်္ကျီ;4 စတိုင်များ,32 မျိုးကိုအပြောင်းအလဲ,100 ကျော်အရောင်များ,JIS ဘီ A6909 ရှစ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ,အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုရေစိုခံဆေးသုတ်အင်ဂျင်နီယာများ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေခုခံနှင့်အတူ,ထို့အပြင်ဒဏ်ငွေဒါကိုတော့ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်,ထိုအုတ်ရိုးအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပမထိုးဖောက်ရာမှမိုးရေတားဆီး,နှင့်အများဆုံးအဆင့်မြင့်ဇီဝကိုအသုံးပြုရန်-ရေညှိနှင့်မှိုမွေးမြူရေးနှင့်မိသားစုများ၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ.
ChengLin ဆန်းသစ်ဖောင်းကြွအနုပညာအပြင်မြို့ရိုးကိုဒါးနည်းလမ်းပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုသည်-အလွှာများနှင့်အလွန်အမင်းခက်ခဲအပေါ်ယံပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်း.အပြင်မြို့ရိုးကိုအလှဆင်မီ,ကထရံကိုမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး,မြို့ရိုးအမျက်နှာပြင်ခိုင်မာစေ,မြို့ရိုး၏ပြင်ဘက်မှာ, အလွှာဖို့အလွှာဟာအပေါ်ယံပိုင်း.ကမ္ဘာကြီးကိုအသုံးပြုခြင်း's ကိုအများဆုံးတိကျခိုင်မာစွာထိပ်တန်း-အဆင့်အပေါ်ယံပိုင်းနည်းပညာ,အာရှနိပွန်မှုစနစ်အင်ဂျင်နီယာကုတ်အင်္ကျီ,အာရှအရောင်းချန်ပီယံရာဖြစ်ပါသည်,မဟုတ်မှသာကယ်ဆယ်ရေးပိုပြီးအစိုင်အခဲကို,ပုံစံထူဖြစ်ပါသည်,ဒါပေမယ့်လည်းဗေဒကယ်ဆယ်ရေးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးပေး,နှင့်ရာသီဥတုခုခံ၏မြင့်မားသောဒီဂရီရှိပါတယ်.မြို့ရိုးကိုဆေးသုတ်,ဝယ်လိုအားအရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသောအပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုဖောင်းကြွဆေးသုတ်ကိုက်ညီခြင်းဆေးသုတ်ရှေးခယျြနိုငျ,elastic function ကိုရှိပါတယ်,မြို့ရိုးပေါ်မှာဒဏ်ငွေလိုင်းများကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါတယ်,နှင့်မြင့်မားမဟုတ်သောချမှတ်-အဆိပ်သင့်,ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ,ဘေးကင်းလုံခြုံရေ-based ဆေးသုတ်သည့်စနစ်,အပြင်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေရောင်နှင့်ထိတွေ့သော.အိပ်ဇောလေထုညစ်ညမ်းမှု၏ကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်နေဆဲအရောင်စွမ်းဆောင်ရည်အရောင်ကျော်လွန်စေနိုင်သည်,တောက်ပသစ်,နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကော်ရှိပါတယ်,အဆိုးဆုံးသဘာဝအခွအေနမြေားကိုတှနျးလှနျနိုငျပါသညျ,နှင့်ပထမဦးဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်-ထိုင်ဝမ်တန်းအပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုရေစိုခံတာထုတ်ကုန်,လုံးဝပြင်မြို့ရိုးအများ၏အလှဆင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွင်းမြို့ရိုးပေါ်မှာ seepage မြို့ရိုးကိုကင်ဆာများ၏ပြဿနာကိုရှောင်ရှား.
ကွဲပြားခြားနားသော texture သက်ရောက်မှုအရ,ကွဲပြားခြားနားသောဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများသုံးအတူနံရံတစ်ခုမျက်နှာပြင်ကိုဖွဲ့စည်းရန်အသုံးပြုကြသည်-ရှုထောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု.ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အသစ်သောအဆောက်အဦများနှင့်အိမ်၏အပြင်ပန်းနံရံဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်,စားသောက်ဆိုင်,အဆောက်အဦးများ,ကျောင်းများ,စသည်တို့ကို.,ပြင်ပနံရံပန်းချီကား,အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေး,အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားအရေခွံ,အိမ်သူအိမ်သားအရေခွံ,ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကျင့်ကိုကျင့်,ဒဏ်ငွေဒါကိုတော့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရေယိုစိမ့်ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သော.ပြိုလဲပြီနံရံတစ်ခုရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခြယ်သ,ထိုကဲ့သို့သောအုတ်အဖြစ်.
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေမှိုအင်ဂျင်နီယာ X ကို၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုလယ်နားလည်ရမယ်,entry ကိုကနေကျွမ်းကျင်သူလမ်းညွှန်,ဂျပန်'s ကိုလူကြိုက်အများဆုံးရေမှိုဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်း,ကျယ်ပြန့်ရေမှိုအလှဆင်နှင့်ရေမှိုရေစိုခံများတွင်အသုံးပြုထားသည်,ဂျပန်ဗိသုကာမော်ဒန်ဖြစ်ပါသည်,တစ်ဦးဆေးသုတ်နည်းလမ်း,အဆိုပါအလှဆင်မျက်နှာပြင်ကိုလည်းအလွန်အလှဆင်သည်နှင့်လည်းအလှဆင်ကွန်ကရစ်ဟုခေါ်သည်ခြယ်.အခြေခံအယူအဆကွန်ကရစ်ပြီးနောက်ထားရှိကြောင်းဖြစ်ပါသည်,မည်သည့်ဆေးသုတ်အပေါ်ယံပိုင်းမရှိတော့လည်းမရှိ,tile,ကြောကျ,စသည်တို့ကို.,အရာကွန်ကရစ်တစ်လွင်ပြင်လမ်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်.လူအများစု'ထိုသို့ s ကိုတွေ့ကြုံ,အဆိုပါအနိမ့်အဘို့ မှလွဲ.-အဆောက်အဦး၏သော့နှင့်ရိုးရှင်းသောဗေဒ,အများဆုံးဖြစ်ကောင်းနာမည်ကြီးဂျပန်ဗိသုကာပညာရှင် Ando Tadao ၏သီးသန့်ဂန္ထဝင်ဗိသုကာ technique ကိုအဖြစ်စဉ်းစားပါလိမ့်မည်.တကယ်တော့,အဆိုပါ Qingshui မော်ဒယ်တစ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.တိကျသောအဆောက်အဦဖောင်ဒေးရှင်းအင်ဂျင်နီယာ.တိကျမှန်ကန်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေမှိုလျှောက်လွှာ၏အမြင့်ဆုံးနိယာမဖြစ်ပါသည်.စုစုပေါင်းအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်အမှားအယွင်းများ2ထက်မပိုများမှာ~3 စင်တီမီတာ.ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်,က Integrated grouting နှင့် demoulding ပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့မရနိုင်,သော post ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်-အဆိုပါပြုပြင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပိုလျှံစွန့်ပစ်ထုတ်လုပ်ရန်တိုးမြှင့်အချိန်.ယင်းအပေါ်ထိခိုက်-site ကိုအင်ဂျင်နီယာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသဘာဝမှထိခိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်.ထိုကွောငျ့,အစွန်းရောက်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ-မြင့်မားသောတိ;တင်းကြပ်စွာဆောက်လုပ်ရေးမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်,နှင့်ဂရုတစိုက်ဆောက်လုပ်ရေးရှေ့တော်၌ထိုသုံးသပ်ချက်ကိုစီစဉ်,အရပျ၌တစ်ချိန်ကအမှားဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်.
Chenglin ဆန်းသစ်သောကြည်လင်သောရေမှို အသုံးပြု. အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုမြို့ရိုးရဲ့အကောင်းဆုံးလွင်ပြင်အရောင်ရရှိရန်နိပွန်နိပွန်မူပိုင်စနစ်၏ကွန်ကရစ်အပေါ်ယံပိုင်းကိုအသုံးပြုသည်.Chenglin ထုတ်လုပ်မှုသေချာဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေမှိုပန်းချီစနစ်အားရှိပါတယ်.ရေ-မှိုမြို့ရိုးကိုချွေတာရေစိုခံ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ်,အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခုခံနှင့်မြင့်မားသောရာသီဥတုကိုခုခံကာကွယ်မှု.တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ,သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်,ထိုအုတ်ရိုးအပူကိုတှနျးလှနျနိုငျသညျ,ခရမ်းလွန်,အက်စစ်မိုး,ညစ်ညမ်းစေခြင်း,ရေညှိ,မှို,သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေအောင်မြင်ရန်,အလှတရားကိုထိန်းသိမ်းရန်,ကယ်တင်.အနာဂတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များ.
ဆောက်လုပ်ရေး။ ဒါဟာအပြင်မြို့ရိုးကိုရေစိုခံတာသည်, tile ကိုပစ္စည်းအားလုံးပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး
, အခွံကိုတိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း, Level လွှမ်းခြုံနှင့် JP နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုအုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရမည်မဟုတ်ပါ! အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးကာလကိုအတိုကောက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ, အလျင်အမြန်ဟောင်းအိမ်သူအိမ်သားပြုပြင်မှုများလုပ်သငျသညျကိုကူညီပေးပါတယ်။